Ciidamada booliska Australia ayaa sheegey in afar ruux oo shalay laga qabtay magaaala Sydney ee waddankaas ay qorshaynayeen in weeraro ismiidaamin ah ku qaadaan xero ciidamada milatariga dalkaas ay ku leeyihiin duleedka Sydney. – Radio Daljir
Agoosto 5, 2009 12:00 b 0
Wararka hordhaca ah ee ka soo baxaya boolisku waxa ay intaas raacinayaan in ay shaqsiyaadkan damacsanaayeen ka hor inta aanay naftooda miidaan in ay dad badanna sii toogtaan. Raggan ayaa ay da?doodu u kala dhaxaysaa 22 ilamaa 26 jir, sida ay saraakiisha ammaanka ee Australia tibaaxeen.
Booliska Australia oo tixraacaya xogo dhinaca sirdoonka ah ayaa sheegey in kooxahan ay xidhiidh la wadaagaan ururka Al-shabaab ee la rumaysan yahay in uu gacan saar la leeyahay Al-qaacidda.
Sirdoonka dalkaasina waxa uu sheegey in 7 bilood oo hore lagu raadjoogay wararka la xidhiidha waxa ay raggan oo u kala dhashay dalalka Soomaaliya iyo Lubnaan ay beegsanayeen.
Raggan lagu eedeynayo maleegidda falalka argagixisonimo ayaa shalay ay ciidamada booliska ee dalkaas qabteen markii ay hawlgal ay ku sameeyeen 19 guri oo ku yaalla degaanka laga soo xidhay.
Ma aha markii ugu horraysay oo shaqsiyaad Soomaaliyeed oo qubo ku nool ah lagu eedeeyo xidhiidh kala dhexeeya ururka Alshabaab iyo qorshaynta falal ammaanka dalalka ay joogaan ka dhan ah.
M/weyne Shariif oo shir jaraa?id ku qabtay Villa Somaliya, kana hadlay kulanka uu la yeelan doono Hillary Clinton. [Akhris …]